We.com.mm - သင့်ဘဝလမ်းကြောင်းအတွက် ရည်မှန်းချက်နဲ့ ဝါသနာကို ဘယ်လိုရှာဖွေမလဲ?
သင့်ဘဝလမ်းကြောင်းအတွက် ရည်မှန်းချက်နဲ့ ဝါသနာကို ဘယ်လိုရှာဖွေမလဲ?
4 months ago by Cherry Mon
လူအတော်များများအတွက် အထက်တန်းကျောင်းပြီးစီးချိန်ကစလို့ မိမိဘဝလမ်းကြောင်းကို ရွေးချယ်ဖို့ လိုအပ်လာပါပြီ။ တချို့တွေက အထက်တန်းပြီးတဲ့အခါ ရွေးချယ်မှုမှားယွင်းပြီး သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကတစ်ခု ကိုယ်ဖြစ်တာကတစ်ခု ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်ကျမှ လမ်းကြောင်းပြောင်းမယ်ဆိုရင် သိပ်မလွယ်တော့ ပါဘူး။ အထက်တန်းပြီးတဲ့အခါ ဘာဆက်လုပ်မလဲမေးရင် ရည်ရွယ်ချက်ကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ထုတ်ပြောနိုင်တဲ့သူ ရှားပါတယ်။ စာမေးပွဲအောင်ဖို့နဲ့ အမှတ်များများရဖို့ကိုပဲ ဦးတည်လာကြတာ ကြောင့် စာမေးပွဲအောင်ပြီးတဲ့အခါ ကိုယ် ဘာလုပ်ချင်လဲ၊ ဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတဲ့ ကိုယ်ပိုင်အတွေးမျိုးကို မတွေးမိကြတော့ပါဘူး။
အဲဒါကြောင့် ရည်မှန်းချက်ကို ရှာမတွေ့သူတွေ ဒါမှမဟုတ် မိမိဘာဖြစ်ချင်မှန်းမသိဘဲ လမ်းပျောက်နေ သူတွေအတွက် သင့်ရဲ့ဝါသနာနဲ့ ရည်မှန်းချက်ကို ရှာတွေ့စေဖို့ အထောက်အကူပေးမယ့် အချက်တချို့ကို စုစည်းဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။
၁။ သင် လုပ်ဆောင်ရတာသဘောကျတဲ့ အရာ ဒါမှမဟုတ် သင်ကျွမ်းကျင်တဲ့ အရာကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ပါ
သင်အမြဲ လုပ်ချင်နေတဲ့ အရာတစ်ခုကို ရှာကြည့်ပါ။ သင့်ကို ပျော်ရွှင်စေတဲ့အလုပ်ဟာ သင်ကျွမ်းကျင်တဲ့အရာ ဖြစ်နိုင်ချေရှိပါတယ်။ သင်က အိမ်တွေဆောက်ရတာကို ဝါသနာပါတာလား၊ ဆေးကုပေးရတာကို ဝါသနာပါ တာလား ဒါမှမဟုတ် ပုံဆွဲနေရတာကို ဝါသနာပါတာလား။ သင်ဝါသနာပါတာ တစ်ခုခုတော့ ရှိကိုရှိပါတယ်။ ဥပမာ စာသင်ပေးရတာ၊ စာရေးတာနဲ့ သီချင်းဆိုတာ။ ဝါသနာဆိုတာ သင် အဲဒီအရာကို လုပ်ဆောင်တိုင်း အမြဲတမ်း အချိန်မရွေး သဘောကျပျော်ရွှင်နေတတ်မျိုးကို ဆိုလိုတာပါ။
၂။ သင် ကလေးဘဝက ဘာလုပ်ရတာကို ကြိုက်နှစ်သက်လဲ?
ကလေးတွေဟာ ဖြူစင်ပြီး သူတို့ ဘာလိုချင်တယ်ဆိုတာကိုလည်း အတိအကျသိကြပါတယ်။ အဲဒီတော့ သင် ကလေးဘဝက ဘယ်အကြောင်းအရာကို အများဆုံးပြောဖြစ်လဲ? ဘာလုပ်ရတာကို ကြိုက်လဲ? ဘယ်အရာကိုပဲ မနေမနားလုပ်နေလို့ သင့်မိဘက ဆူဖူးသလဲ? အဲဒီလို မေးခွန်းလေးတွေ ကိုယ့်ကိုယ်မေးကြည့်ပါ။ သင် ကလေး ဘဝက မပျင်းမရိ အမြဲလုပ်နေတတ်တဲ့အရာက သင့်စိတ်ရဲ့အနက်ရှိုင်းဆုံးမှာ ပေါက်ဖွားနေတဲ့ သင့်ရဲ့ ဝါသနာ ပါပဲ။
၃။ သင့်အားနည်းချက်နဲ့ အားသာချက်ကို သိပါစေ
သင်ဘယ်နေရာမှာ တော်တယ်ဆိုတာကို သိမှာ သင့်မိဘလည်း မဟုတ်ပါဘူး၊ သင့်သူငယ်ချင်းတွေလည်း မဟုတ်ပါဘူး၊ သင်ကိုယ်တိုင်ပါပဲ။ သင့်မိဘနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ လောင်းရိပ်အောက်မှာ သင့်ဘဝလမ်းကြောင်း ရွေးချယ်မှု ရှိမနေသင့်ပါဘူး။ အဲဒီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာ သင့်တစ်ဘဝလုံးစာ လျှောက်လှမ်းသွားရမှာ ကြောင့်ပါပဲ။ အဲဒါကြောင့် ဘယ်သူ့ပြောစကားကိုမှ နားမယောင်ဘဲ မိမိ ဘယ်အရာပေါ်မှာ အားသာတယ်၊ ဘယ်အရာမှာ အားနည်းတယ်ဆိုတာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ မိမိရဲ့ဝါသနာဟာ မိမိရဲ့အားသာချက် လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
၄။ ကျောင်းတက်တုန်းက ဘယ်ဘာသာရပ်ကို သင်ယူရတာ ပျော်သလဲ?
ကျောင်းမှာသင်ရတဲ့ ဘာသာရပ်များစွာထဲက သင်ယူရတာကို ပျော်တဲ့ ဘာသာရှိသလို လုံးဝမသင်ချင်တဲ့ ဘာသာလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ သင်ဟာ ဘာသာစကားတစ်ခုခုကို သင်ယူရတာ ပျော်သူလား၊ ဒါမှမဟုတ် ဇီဝဗေဒမှာ ပုံလေးတွေ ဆွဲရတာကို ပျော်သူလား၊ ဒါမှမဟုတ် တိရိစ္ဆာန်လေးတွေရဲ့ ဇီဝဖွဲ့စည်းပုံကို စိတ်ဝင်စား သူလား၊ ဘောဂဗေဒဘာသာရပ်မှာ စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ စဉ်းစားရတာကို နှစ်သက်သူလား၊ သင်က တွက်ချက်ရတာကို သဘောကျသူလား။ အဲဒီလို အချက်တွေကလည်း သင့်ရဲ့ဝါသနာနဲ့ ရည်မှန်းချက်ကို ရှာဖွေ ရာမှာ အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
၅။ ဝင်ငွေအတွက် အရင်ဆုံး မတွေးပါနဲ့ဦး
သင်ရွေးချယ်မယ့်အရာဟာ ဝင်ငွေများများ ဝင်နိုင်တဲ့ အလုပ် ဟုတ်/မဟုတ် အရင်မတွေးပါနဲ့ဦး။ ဝင်ငွေတစ်ခု တည်းကို တွေးပြီး ရွေးချယ်လိုက်တဲ့အလုပ်ဟာ သင့်အတွက် မှားယွင်းတဲ့ရွေးချယ်မှု ဖြစ်နိုင်ချေများပါတယ်။ သင့်ရည်မှန်းချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရင်းနဲ့ သင်ကျွမ်းကျင်မှုရှိလာတဲ့အခါ ဝင်ငွေက သင့်နောက်ကို အလိုလိုလိုက်လာပါလိမ့်မယ်။
၆။ သင်ကိုယ်တိုင်အတွက် အချိန်ယူပါ
မိဘက ဘာဖြစ်စေချင်တာလဲ၊ သူငယ်ချင်းတွေက ဘာဖြစ်ရင် အထင်ကြီးမလဲ၊ ပတ်ဝန်းကျင်က ဘာပြောမလဲ ဆိုတာထက် သင်ကိုယ်တိုင် အချိန်ယူစဉ်းစားပြီး သင်အဖြစ်ချင်ဆုံးအရာကို ရွေးချယ်ပါ။ သင့်ရဲ့ ရွေးချယ်မှုဟာ သင့်တစ်ဘဝလုံး လုပ်ဆောင်သွားရမယ့် အရာဖြစ်တာကြောင့်ပါပဲ။ သင်တစ်ဘဝလုံး လုပ်ချင်တဲ့ လမ်းကြောင်း ကို ရွေးချယ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ခရီတစ်ဝက်ကျိုးမှ နောက်ထပ်လမ်းကြောင်းပြောင်းဖို့ဆိုတာ မလွယ်လှပါဘူး။
Ref; India Education, Jack Canfield, Medium
ဇူလိုင် (၁၃) မှာ ထွက်ရှိမဲ့ “Selena Gomez” ရဲ့ သီချင်းအသစ်
တောင်ကိုရီးယားရဲ့ပထမဦးဆုံး Zombie ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ ပါဝင်ဖို့ စဉ်းစားနေတဲ့ Song Joong Ki
4 months ago by Mozex
4 months ago by June Nine Aung
2 months ago by Cherry Mon